IT Support – Shwe Myanma Thway
Standard Grab Bar – 18″/ 24″/ 36″
June 29, 2020 IT Support Leaveacomment
မတော်တဆချော်လဲမှု ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်း၏ ၇၀% မှာ အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်းများ တွင် ချော်လဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ဟု WHO ၏ လေ့လာစစ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့သော အန္တရာယ် မှ သင့်မိသားစုအား ကာကွယ်ရန် လူကြီးမင်းတို့၏…
Posted in: Activities Filed under: Grabbar, StainlessSteel
Donation Vassa-Robe, Midyear Staff Party and Promotion at Shwe Myanma Thway Co.,Ltd – North Dagon Branch Office (Yangon)
June 28, 2020 IT Support Leaveacomment
ကျွန်တော်များ ရွှေမြန်မာ့သွေး ကုမ္ပဏီ မိသားစု၏ ရုံးခွဲသစ်အဖွင့် မင်္ဂလာ၊ ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ်ခြင်း၊ Midyear Staff Party နှင့် Promotion ချီးမြှင့်ခြင်း များကို ရုံးခွဲသစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ…
Posted in: Activities Filed under: DONATION, Midyaers and Promotion, Staff Party
Stay At Home and Stay Healthy! 🚴🚴🚴
May 8, 2020 IT Support Leaveacomment
အိမ်မှာ စာအုပ်ဖတ်နေရင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း၊ ဂိမ်းကစားနေရင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ရအောင်။ Pedal Exerciser နဲ့ ပုံမှန် လေ့ကျင်းခန်း လုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများက… 💚 ခြေသလုံး၊ ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ခါး၊ လက်မောင်း၊…
Posted in: Activities Filed under: Pedal Exerciser
အိမ်/ဆေးရုံ/ကျန်းမာရေးဌာန များအတွက် သုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လှူဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲတွင် ရရှိနိုင်ပါပြီ😊
May 7, 2020 IT Support Leaveacomment
အိမ်/ဆေးရုံ/ကျန်းမာရေးဌာန များအတွက် သုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လှူဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲတွင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ 🏠🏥🩺⚕️ ဆေးရုံသုံးအဆင့်ပစ္စည်း များဖြစ်ပြီး၊ စင်ကာပူတွင် တပ်ဆင်ခြင်း၊ Quality Check ခြင်း၊ Test ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာတင်သွင်းသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်‌‌ပါတယ်။…
# မြန်မာတို့၏ အသွေးအသားထဲ အမြဲ စီးဆင်းနေမည့် ရွှေမြန်မာ့သွေး#
May 1, 2020 IT Support Leaveacomment
We are2years young today! Heartiest Thanks to our SMMT family, extended families, customers, clients, partners and fellow friends…
အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းနဲ့ Comfycare order မှာပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပြုစုဂရုစိုက်လိုက်ပါ။
April 23, 2020 IT Support Leaveacomment
COVID19 Outbreak လည်းဖြစ်၊ ရာသီဥတုကလည်း မတရားပူလာတော့….. အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းနဲ့ Comfycare order မှာပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပြုစုဂရုစိုက်လိုက်ပါ။ အိမ်နေလူနာများ/ မွေးလူနာများ/ ခွဲစိတ်ပြီးစ လူနာများ/ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နေ့စဉ် ဆီး၊ ဝမ်းသွားရေး…
#ComfycareMyanmar #Comfycare #SMMTMyanmar #AdultDiaper #Underpad #Singapore #StayHomeSafeLives
April 22, 2020 IT Support Leaveacomment
ဆေးရုံများအသိအမှတ်ပြု မြန်မာ့ရာသီဥတုနှင့် အကိုက်ညီဆုံး Comfycare Singapore မှ လူကြီးသုံး Diaper Pants နှင့် Underpad များ ကို အိမ်မှာနေရင်း ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ ခင်ဗျာ။ ၈ထုပ်နှင့်အထက် မှာယူလျှင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း FREE…
Shwe Myanma Thway (Comfycare Myanmar) ကာလဒါန (02 April 2020)
April 2, 2020 IT Support Leaveacomment
Shwe Myanma Thway (Comfycare Myanmar) ကာလဒါန (02 April 2020) Pandemic ကာလဖြစ်တာရော၊ နွေရောက်လာလို့ရော၊ အမျိုးသမီး‌‌မွေးလူနာများနှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များ အေးအေးလူလူ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အိပ်စက်အနားယူနိုင်စေရန် Comfycare Disposable Incontinence…
#မြန်မာတို့၏ အသွေးအသားထဲတွင် အမြဲစီးဆင်းနေမည့် ‌‌‌ရွှေမြန်မာ့သွေး#
March 30, 2020 IT Support Leaveacomment
သတ္တဝါဝေနေယျ အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာဘေးဘယာဝေးကွာကြပါစေ 😊🙏
IT Support Leaveacomment
Notice ၁) ဝန်ထမ်းများ အနားယူချိန် ပိုများစေရန် နှင့် လူစုလူဝေးမှ ‌‌ေရှာင်ရှားရန် company operating hours ကို အောက်ပါအတိုင်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိပြောင်း လဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။ Mondays – Fridays (except Public…